Baaq-nabadeed oo ka soo baxay beesha Cali Jabraahiil, kuna aaddan colaaddii Kob-dhexaad iyo Igdhays. – Radio Daljir
Baaq-nabadeed oo ka soo baxay beesha Cali Jabraahiil, kuna aaddan colaaddii Kob-dhexaad iyo Igdhays.
Ufayn, Oct 18 ? Beesha Cali Jibraahiil oo ka mid ah beelaha deggan gobolka Bari ee Puntland ayaa maanta soo saaray baaq-nabadeed oo ku wajahan xurgufo colaadeed oo horay uga dhex-dhacay iyaga iyo beel kale oo gobolka Bari ay wada deggan yihiin.
Baaq-nabadeedka beeshu ay maanta soo saartay ayaa ka soo baxay kulan muddo todobaad ah uga socday degmada Ufayn ee gobolka Bari, ayna ka soo qaybgaleen dhammaan wax-ku-oolka beesha ee dalka iyo dibadda kaasoo ku astaysnaa qaabaynta iyo gun-u-dhigidda heshiis-nabadeed iyo ka qoomamaynta wixii dhacay.
Tiraabn-nabadeed ee ay soo saareen beesha Ufayneed oo ku soo baxay qoraal, ayaa muujinaya niyad-sami ku aaddan ka gudbidda wixii dhacay iyadoo loo guntanayo sidii looga xal iyo xaajo qaadan lahaa falalkii colaadeed ee dhacay iyo khasaarihii naf iyo maal ee ka dhashay, waxaana dhinaca kale baaqu uu iftiiminayey beel ahaan in la isla guddoonsaday dib dambe in uusan u dhicin tallaabo-qaad-dhibeed.
Nuxurka baaqaasi oo uu Radio Daljir soo gaarsiiyey wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda maaliyadda Puntland Yaasiin Cartan Maxamed, ayaa dhinaca kale tilmaamaya fidinta gogol-nabadeed oo xal looga gaaro dhammaan xumaantadii dhacday, taasoo beeshu ay ballan-qaadayso hirgalinteeda.
Ugu dambayntii baaqa-nabadeed ayaa dhammaan beelaha Puntland ka dalbaday in la joojiyo colaadaha iyo is-xumaansiga dhexdoodada ah, loona jahaysto nabad ku wada noolaansho cimri-dheer, waxaana uu si gaar ah nuxurka baaqu u taabtay xiisadaha haatan ka jira meelo ka mid ah gobolka Karkaar.
Sikastaba ha ahaatee baaqaan nabadeed ayaa yimid xilli ay muddo soo jiitamaysay xurguf colaadeed oo dhex-tiillay beeshaasi iyo beel kale oo iyana ka mid ah beelaha deggan gobolka Bari, loona tab iyo tag waayey xallinteeda.